Manazava ny seminera ny fomba hahalalanao fa ny "Domain Registration Service" mailaka nomena anao dia trangam-panafody
Ny fitaka dia lasa fihaonana amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa aterineto. Tranonkala e-commerce maro no iharan'ny vokatry ny hosoka. Misy fomba maro azon'ny olona ampiasaina mba hamantarana sy hanafoanana ny spam. Betsaka ny orinasa misedra lozam-pifamoivoizana raha misy fanafihana spam. Amin'ny tranga hafa, ny vohikala e-commerce dia mahatonga ny olona mandany an-tapitrisany amin'ny fanafihana ny hosoka amin'ny aterineto toy ny fangalarana karatry ny carte de crédit. Ho an'ny ankamaroan'ny orinasa fampiantranoana tranonkala, mora ny mahafantatra ny karazana spam izay ahafahan'ny orinasa iray miatrika ny fomba mety hisorohana ny spam.
Igor Gamanenko, Semalt Mpitarika Success Manager, dia miteny fa ny mailaka mailaka dia misy toetra sasany mahamarika toy ny:
Ry mpizara sehatra samihafa. Ny ankamaroan'ny spam dia tsy avy amin'ireo mpamoaka mari-pahaizana ara-dalàna. Avy amin'ny vohikala izay miezaka manamboatra mailaka izy ireo. Manomboka mamorona adiresy mailaka izy ireo izay ampiasain'izy ireo handefa ny fanafihana mivatravatra. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ireo lisitra mailaka ireo dia azo vidiana amin'ny vidin'ny tsena finday. Ny mpitsoa-ponenana an-tserasera dia mety ho fototry ny fanavahana ny mailaka maimaim-poana avy amin'ny mailaka ara-dalàna.
Ny lanjany amin'ny sehatra ambony ambony. Ny mailaka maimaim-poana dia tsy misy dikany amin'ireo mpizara mailaka an-tserasera ambony indrindra. Ohatra, manana ny anaran'ny olona na zavatra izy ireo fa tsy raharaham-barotra ara-drariny na fandoavam-bola. Ny sampan-draharaham-pifandraisana avy any ivelany izay avy amin'ny loharanom-pitsarana dia manana sehatra mazava sy sehatra referanda..Azonao atao ny mampiasa ny serivisy mailaka izay mety hahasoa anao ary koa hahazoana antoka ny traikefa amin'ny sehatra iray manontolo.
Ny fisian'ny hadisoana amin'ny votoaty. Zava-dehibe ny fitadiavana tsy fahatanterahana amin'ny mailaka sandoka. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia mampiasa fitsipi-pitenenana diso sy logos izay tsy dia mahasoa loatra ny olona. Izany no toetran'ny mpampihorohoro hampiasa fepetra ambany. Na izany aza, misy mpitsikera sasany afaka manapaka io sakana io. Zava-dehibe ny tsy fandikana ity lafiny iray ity ho an'ny mailaka izay mijery ara-drariny. Mety misy ihany koa ny fanodinkodinana sasany amin'ny fomba izay handalovan'ny klika. Mitadiava fanovàna amin'ny fomba izay alefan'ny mailaka ao amin'ny mailboxo.
Email localisation. Ny ankamaroan'ny sehatra ambony ao an-toerana dia manao mailaka izay mora ampiasaina. Ny ankamaroan'ny mpihetraketraka dia mampiasa azy ireo ho fitaovana entina manatratra ny traikefany. Zava-dehibe ny manome antoka fa ny mailaka dia natao ho anao. Amin'ity tranga ity dia azonao atao ny manalavitra ny mailaka tsy manam-potoana izay mety hahatonga anao ho lasa spam.
Rehefa manao tranokala ny olona, ​​dia mikendry ny endriky ny endriny izy ireo. Vokatr'izany dia mety manadino ny fepetra manohitra ny spam sy ny dingana hafa amin'ny fiarovana ny olona iray. Ampahany amin'ny teknolojia ara-barotra amin'ny aterineto, zava-dehibe ny mianatra momba ny karazam-panafihana sy spam. Amin'ny alalan'ny dingana ato amin'ity lahatsoratra ity, azo atao ny manome antoka ny tranokalanao amin'ny ankamaroan'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny aterineto.
Ny Internet dia loharano lehibe izay afaka manampy olona maro. Vokatr'izany, ireo orinasa lehibe dia mampiasa ny aterineto ho toy ny solomason'ny mpanjifa. Azonao atao ny mahatratra olona maromaro mampiasa teknikan'ny dokam-barotra tsotra toy ny Search Engine Optimization (SEO). Toy izany koa, ireo hackers sy spammers dia manana fomba hanatsarana ny ezaka ataony isan'andro. Ohatra, afaka manararaotra ireo tra-boina amin'ny voka-dratsiny izy ireo. Ho an'ireo olona manana tranokala, ny fahamendrehany, sy ny an'ny mpividy, dia miankina amin'ny raharaha toy izany Source .